Ciidamada dowladda oo maqaayad kala baxay sarkaal Al-Shabaab ka tirsanaa | Goojacade
Home War Ciidamada dowladda oo maqaayad kala baxay sarkaal Al-Shabaab ka tirsanaa
Ciidamada dowladda oo maqaayad kala baxay sarkaal Al-Shabaab ka tirsanaa
Ciidamada gaarka u tababaran ee Gaashaan ayaa la sheegay in xalay maqribkii ay maqaayad kala baxayn nin hore uga tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku sugnaa degaanka Tareedisho ee duleedka magaalada Muqdisho.
Qaar kamid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ninkaan lagala baxay oo ku taala Tareedisho ayaa sheegay in ninka la qabtay uu kamid ahaan jiray Saraakiisha Al-Shabaab ee degaankaasi balse markii dambe uu ka baxay.
Ninka la soo qabtay ayaa magaciisa lagu soo koobay Maxamuud waxa uuna ka tirsanaa Shaqaalaha Maqaayadda, gaar ahaan qaybta cuntada karisa.
Ciidamadan oo hubeesnaa ayaa la sheegay in ay wateen dhowr gaari, waxayna si deggan maqaayadda qaybta kushiinka ay kala baxeen ninkan oo markaas shaqo ku jiray, iyagoo dadkii ku sugnaa ka dalbaday in ay si dejiyaan.
Previous articleDaawo Somaliland oo ka hadashay xadhiga lala baadigoobayo Ganacsade Axmed Geelle Arab
Next articleWarsheekh: Hooyo 10 caruur ah haysatay oo ninkeedii dilay